Isixhobo sokuqhathanisa iikhowudi okanye iifolda - i-Geofumed
Isixhobo zokuthelekisa khowudi okanye abalawuli
Matshi, 2011 Internet kunye neBlogs
Ngokuqhelekileyo, sinamaphepha amabini afuna ukuthelekisa. Ngokuqhelekileyo kwenzeka xa sisebenzisa utshintsho lomxholo kwi-WordPress, apho nganye ifayile yepp ibonisa inxalenye yetemplate kwaye asiyazi into esiyenzayo. Ukulingana xa uchukumisa iCpanel sisusa ifayile ethile, okanye enye ifolda ayizange iqedele ukulayisha nge-ftp.
Omnye umzuzu xa sisebenze kwifayile kwiLizwi, kwaye emva kokuba sidlulile kwizandla ezahlukeneyo kufuneka sifumane okokugqibela okanye indlela eyahlukileyo ngayo.
Ngenxa yoko kukho izixhobo ezahlukeneyo, ezihlawulelwayo kwaye zihlawulwa. Ukunikezelwa kwesidingo sokwenza umlinganiselo wekhowudi okuphezulu I-Geofumadas, apho umgca ophukileyo wawuvelisa umbuzo ongapheliyo, uye wandinceda kakhulu kum Qhathaniso yeCode, isixhobo esinokulula ukusebenzisa.
Emva kokuzama ukuyikhuphela kwi-Softsonic, leyo yonke imihla iya kuba yinto encinci isebenza ngesikhangiso esininzi, amaqhosha okuqesha inkonzo yokukhuphela ihlawulwe, iifakelo zokukhuphela kunye nokugqiba ukufaka i-RealPlayer ngaphandle kokuyibuza ...
Ndagqiba kwelokukhuphela ngqo kwiziko. Kubizwa Qhathanisa nomgaqo. Ukususela ekuqaleni imenyu ibonakala ingabonakali, kodwa ngemizuzu embalwa uyayiqonda ingcamango kunye nokulula.
Ngakolunye uhlangothi, thelekisa iinkcukacha. Khetha nje iindlela, ezinokuba kwi-drive ekhuni okanye kwenye indawo yesayithi kwakhona, inkqubo ibuyisela ingxelo yeefolda ezahlukeneyo kunye neefayili, ukuphawula ukungafani kwemibala.
Enkulu, ukudibanisa kakuhle kunye ne-Windows Explorer.
Kukwavumela ukuba uqhathanise iifayile ezimbini zetekisi, ubonisa ukungafani kunye nokukhetha ukukopa kwipaneli enye ukuya kwelinye ukuze udibanise.
Omkhulu Kufanelekileyo ukuthelekisa ikhowudi esitshintshileyo kwaye siyifumene iimpazamo zomnwe. Kubasebenzisi abaninzi abanomdla, unamathuba amaninzi ngenxa yokuba isekela iingxabano kumgca wolawulo.
Ukukhuphela Ikhowudi. Ikhululekile
Post edlulileyo«Edlulileyo Guqula iifayile AutoCAD bulk / Microstation
Post Next I-Geofumadas: Uhambo olude kwiifoto ze-8Okulandelayo "